I-Cole-Brook Cottage Indlu yomlando eMcLaren Vale - I-Airbnb
I-Cole-Brook Cottage Indlu yomlando eMcLaren Vale
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Elena
Umuzi wokuqala ngo-1860 waqala impilo yawo njengendawo yokuhlala yodokotela basemadolobheni. Ngokushesha phambili osukwini lwanamuhla futhi uzothola ikotishi elidala elibukekayo elinesandiso sesimanje esiklanywe ngokucatshangwayo, sizungezwe indawo engadini enokuthula.
Itholakala kalula enhliziyweni yeMcLaren Vale, sikude nje kuphela nakho konke okunikezwa yisifunda.
Zizwe usekhaya! Ubhukude echibini, upheke i-BBQ futhi ujabulele ingilazi yewayini ngaphansi kwesihlahla sethu sikapelepele esineminyaka engu-170 ubudala.
Njengoba ungena ngomnyango ongaphambili we-Cole-Brook Cottage yomlando, uzokhangwa izici zakudala eziklanywe ngokucophelela futhi zagcinwa isikhathi eside. Ngezindonga zayo zamatshe, uphahla oluphakeme, izitezi eziphansi ze-flagstone, iminyango namafasitela akhanyayo, i-Cole-Brook Cottage iletha ubuhle bangempela besikhathi esidlule kuze kube namuhla.
Ikotishi lihlanganisa amagumbi okulala angu-2 ophahleni oluphezulu, womabili anemibhede eyindlovukazi, elinye lawo elinegumbi lokugezela eline-ensuite. Igumbi lokugezela lesibili liyatholakala eduze nendawo yokuhlala (igumbi lokulala lesibili kanye negumbi lokugezela lesibili kutholakala kuphela ukubhuka abantu abangu-3 noma 4).
SICELA, ULULUZE UMA UBHEKELA ABANTU ABA-2 FUTHI UDINGA AMAGUMBI OKUBHELELA KANYE NEZINDABA ZOKUGEZA (azikho izindleko ezengeziwe).
Igumbi lokuhlala/lokudlela lilungiselelwe ukuphumula ngesifudumezi sezinkuni, i-smart TV ene-Netflix. Uzothandana nekhishi lesitayela sezwe elilungiswe ngokuphelele, elifaka umpheki ozimele we-Smeg Victorian, ifriji, umshini wokuwasha izitsha, umshini wekhofi we-Nespresso, iketela, i-toaster kanye ne-microwave. Uzokwazi ukufinyelela ngokugcwele kuvulandi omkhulu wangasese ongaphandle nje kwekhishi kanye ne-pergola encane lapho ungathola khona i-BBQ.
Ngaphandle, izingadi ezinwebekayo kuyakujabulisa ukuzibona zinezindlela zeslate ezizulazula engadini yangaphambili. Ngemuva kwendlwana i-Golden Elm enkulu ihlinzeka ngegceke ngomthunzi kuyilapho ichibi elishisayo elisebenzisa ilanga liyindawo okufanele ibe kuyo ngosuku lwasehlobo.
Indawo yokuwasha itholakala ngomshini wokuwasha, isomisi, i-ayina nebhodi loku-ayina.
Ikotishi lifaka isandiso sesimanjemanje, i-Cole-Brook New Cottage nayo iyatholakala ukuthi ingabhukha, ngakho ichibi lingase labiwe nezinye izivakashi ngezikhathi ezithile.
Ikhofi yokuthopha, ubisi, itiye.
Imibandela yokudla kwasekuseni ifakiwe.
Amabhayisikili angu-2 ayatholakala ukuze uwasebenzise eduze kwe-Shiraz trail, etholakala kuphela ku-100m ukusuka emnyango wethu wangaphambili.
4.89 · 111 okushiwo abanye
Itholakala enhliziyweni yelokishi laseMcLaren Vale, ibanga lokuhamba ngezinyawo ukuya ezitolo, amathilomu kanye nezindawo zokuthengisa iwayini
Sihlala kude nendlu futhi siyatholakala uma kudingeka